We.com.mm - သင့်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ အပြုအမူ(၈)ချက်…။
မိန်းကလေးတိုင်းကတော့ ကိုယ့်ကိုချစ်ရေးဆိုပြီး ချဉ်းကပ်လာပြီဆိုတာနဲ့ သေချာစဉ်းစားပြီး၊ ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်တယ်လို့ယူဆပြီး သူတို့ရဲ့အချစ်တွေကိုလက်ခံတတ်ကြပါတယ်…။ ကိုယ့်ဘက်က သူ့အချစ်ကိုလက်ခံလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဒီယောက်ျားလေးက ကိုယ့်ကိုတကယ်ချစ်တယ်လို့ပဲယူဆပြီး ဘဝလက်တွဲဖော်လို့တောင် သတ်မှတ်တတ်ကြပါတယ်…။
ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ်က တကယ်ချစ်တယ်လို့ထင်ထားပေမယ့် နောက်ဆုံးကျ ရေစက်ကုန်သွားရတာတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်….။
အစထဲက ကိုယ့်ကို တကယ်မချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ ဆုံခဲ့ရတာကြောင့်ပါပဲ…။
ဒီတော့မိန်းကလေးတိုင်း ရည်းစားထားပြီဆိုတာနဲ့ ဒီလူကိုယ့်ကိုတစ်ကယ်ချစ်လား၊ မချစ်လား ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ…။ ကိုယ်နဲ့တွဲနေရင်းနဲ့ ကိုယ့်အပေါ် ပြုမူပုံတွေကိုကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်…။ ကိုယ်နဲ့တွေနေတဲ့အခါ ကိုယ့်ကို သူဘယ်လိုဆက်ဆံလဲ၊ ကိုယ့်ကို ဘယ်လိုတွေပြောလဲ… စတာတွေကို လေ့လာကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်နော်…။
(၁) သင်နဲ့တွေ့နေတဲ့အခါမှာ သူရဲ့အမူအရာတွေက ပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံပေါ်လွင်နေတယ်…။
သင်ပျော်ရွှင်အောင် သူ့အနေနဲ့ လူကြားထဲမှာလည်းရှက်ကြောက်နေတာမျိုးမရှိပဲ…၊ သင့်အတွက်ပဲကြည့်ပြီးနေတတ်တဲ့ သူမျိုးဖြစ်တယ်…။
သင်နဲ့အတူတူရှိနေတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာ တစ်ခါတစ်လေကျရင် သင်မသိအောင် ခိုးကြည့်နေတတ်တယ်…။
အပြင်တွေသွားပြီး မုန့်စားနေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆို သတိထားပြီး အကဲခတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်…။ သင့်ကမုန့်စားနေတုန်းမှာ သူသင့်ကိုငေးကြည့်ရင်ကြည့်နေမှာပါနော်…။
သင်ပျော်ဖို့အတွက် ဘာလုပ်ပေးရမလဲပဲ ကြည့်နေတတ်တဲ့ သူမျိုးပါနော်…။
အနာဂတ်ကြောင်းအရာတွေထဲမှာ သင်အမြဲပါနေတတ်ပါတယ်…။သူပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင် ကြည့်ရင်လည်းသိနိုင်ပါတယ်…။ သူ့ရဲ့အနာဂတ်အစီစဉ်တွေထဲမှာ သင်အမြဲပါဝင်နေတတ်ပါတယ်…။
သင့်ကိုချစ်တဲ့အကြောင်းတွေ မကြာခဏဆိုသလိုပြောပြပါလိမ့်မယ်…။သင့်ဆီက တစ်ခုခုမျှော်လင့်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ဒီတိုင်းသူ့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ချစ်တဲ့အကြောင်းတွေကို ပြောပြချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲ ခဏခဏဆိုသလို သင့်ကိုချစ်တဲ့အကြောင်းတွေပဲပြောနေပါလိမ့်မယ် …။
သင်ဘာအမှားတွေပဲလုပ်လုပ် သင့်ဘက်ကအမြဲရှိနေပြီး သင့်လုပ်ရပ်တွေအတွက်လည်း စိတ်မပျက်တဲ့သူမျိုးပါ…။
သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေအကုန်လုံးကို သင်နဲ့ပဲအချိန်ကုန်ဆုံးချင်နေတာမျိုး…။ အလုပ်ကနေစောစောပြီးလို့ အချိန်ရနေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်း သင့်နဲ့မုန့်ထွက်စားဖို့လာခေါ်နေမယ့်သူ…။ မတွေ့ဖြစ်ရင်တောင် သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေမှာ သင်နဲ့ပဲဖုန်းတွေပြောနေတတ်တဲ့ သူမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်…။
သင်နဲ့မတွေ့ခင်အချိန်တွေမှာ သူဖြစ်ခဲ့တာတွေ၊ သူ့ရဲ့ အားနည်းချက်တွေ၊ သူရဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းက ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို မရှက်ဘဲသင့်ကိုပြောပြနေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ သူ သင့်ကို တစ်ကယ်ချစ်လို့ပါပဲ…။
credit image from Google.
စုံတွဲလေးတွေအတွက် ဆင်တူထိုးလို့ရမယ့် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ တက်တူးဒီဇိုင်းများ…
တစ်ယောက်လက် တစ်ယောက် ဆုပ်ကိုင်ရင်း လေယာဉ်ပေါ်မှာ ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ စုံတွဲ
ရည်းစားဟောင်းကိုမေ့ပစ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၅) ခု
ကလေးမျက်နှာထောက်ပြီး မကွာရှင်းရဲတဲ့အခြေအနေက မှန်ရဲ့လား?
လောကဓံကို ရင်မဆိုင်နိုင်လို့ အလှဖန်တီးရှင်တစ်ဦး ကိုယ်တိုင် Video ရိုက်ပြီး ကြိုးဆွဲချသတ်သေ
Fan တွေကြား အငြင်းပွားစရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ John Wick3နဲ့ Endgame ရဲ့ဝင်ငွေနှိုင်းယှဉ်မှု